Tag: USA | Sagal Radio Services
Maxkamada Sare Maraykanka oo ku taageertay go’aan uu Trump ku mamnuucay safarka muwaadiniin
Maxkamada Sare ee Maraykanka ayaa ku taageertay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump go’aankii uu ugaga mamnuucay inay dalka Maraykanka u soo safraan muwaadiniin ka soo jeeda qaar ka mid ah dalalka Islaamka.
Dowlada Maraykanka oo cabasho ku saabsan Milatariga u gudbiyay dowlada Shiinaha
Dawladda Maraykanka ayaa si rasmi ah cabasho ugu gudbisay dawladda Shiinaha ka dib markii marar kala duwan la shiishay oo shucaac lagu qabtay duuliyeyaasha Maraykanka.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqasho ku kala bixin doona dalal ka tirsan Qaaradda Afrika, si uu u xoojiyo cilaaqaadka iyo iskaashiga Mareykanka la leeyahay Afrika.
Sagal Radio Services • News Report • January 23, 2018
Tobanaan shacab ah ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhawacmeen Soomaaliya, kadib markii Mareeykanku uu kordhiyay Weeradda ka dhanka ah Al-shabaab, baaris uu sameeeyay Wargeeyska the guardian ee kasoo baxa ingiriiska ayaa Muujineeysa cabsi soo kordheeysa oo ku aadan in tilaabadda ay qaaday xukuumadda Washington ay sabab u noqoto taageeradda Al-shabaab oo kororta.
Mareykanka oo weydiistay AMISOM inay sii joogaan Soomaaliya, taageerana u balanqaaday
Iyadoo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ay bishii August ee sanadkan isku raaceen in dhamaadka bisha December laga soo saaro Soomaaliya illaa 1,000 askari oo ka tirsan Howl galka AMISOM, ayaa waxaa tallaabadaas ka hor-yimid Mareykanka oo sheegay in aanay xilligan aheyn waqtigii AMISOM ka bixi lahaayeen Soomaaliya, xilli uu sii kordhayo qatarta Argagixisada ee Geeska Afrika.
Wiil uu adeer u yahay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo lagu dilay dalka Ciraaq
Wasaarada Gaashaandhigga dowlada Maraykanka ayaa xaqiijisay in wiil uu adeer u ahaa ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya kana mid ahaa ururka IS lagu diley labo sano kahor dalka Ciraaq.
Mareykanka oo Taliye cusub usoo Magacaabay Howlgalka ay ka wadaan Soomaaliya.
Sagal Radio Services • News Report • June 4, 2017
Kulan ay maanta ku yeesheen Magaalada Amaan duulaha Ciidamada Mareykanka ee Geeska Africa iyo ku xigeynkiisa ayaa Magacaabay Taliyaha Gaarka ah ee Ciidamada Mareykanka ee Howlgalka ka wada Soomaaliya.
Mareykanka oo ballaarinaya howl galada Milateri ee Soomaaliya
Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in la ballaarinayo howl galada milateri ee ay ka wado Soomaaliya, kaasoo ka dhan ah Kooxda Al-Shabaab.
Doorashada Mareyanka oo billaabatay iyo Shacabka dalkaas oo Dooranaya Madaxweyne Cusub
Sagal Radio Services • News Report • November 8, 2016
Doorashada Madaxweynenimo ee dalka Mareykanka ayaa ka billaabatay goor-dhaw Gobollada Bari ee Dalkaas, iyadoo dadku ay soo dooranayaan Madaxweynihii bedeli lahaa madaxweynaha xilligan ee Barack H. Obama.
Doodii ugu horeysay oo fool ka fool ah oo dhex martay Donald Trump iyo Hillary Clinton
Doodii u horeysay oo fool ka fool ah ayaa xalay dhex martay Musharaxiinta ku loolamaya xilka Madaxweynaha Mareykanka ee Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimoqraadiga Donald Trump iyo Hillary Clinton.
Nin mindi ku weeraray dad wax ka iibsanayay Suuq ku yaal Minnesota oo Soomaali noqday
Nin mindi ku weeraray dad wax ka iibsanayay suuq wayn oo ku yaalla gobalka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa la sheegay in uu ahaa Daahir Adan oo ahaa 22 jir arday ah Soomaali ah.
Qarax dad badan ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada New York
Ugu yaraan 29 ruux ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo waxa sababay qaraxa.
Wararkii ugu dambeeyay ee xaalada caafimaadka musharax madaxweynaha Maraykanka Hillary Clinton
Sagal Radio Services • News Report • September 12, 2016
Dhakhtarka gaarka u ah haweeneyda musharaxa u ah xisbiga Dimuqraadiga dalka Maraykanka ayaa sheegtay in Mrs Clinton ay qabto cudurka qaar-jeexa kadib saacado markii si deg-deg ah loogaga qaaday munaasabad lagu xusayay weerarkii lagu qaaday Maraykank 9/11.
Askari ka tirsan Booliska Maraykanka oo loo haysto inuu xiriir la lahaa IS
Sagal Radio Services • News Report • August 4, 2016
Askari ka tirsan ciidamada Booliska Maraykanka kana howlgalayay xarunta gaadiidka magaalada Washington ayaa lagu helay dambi ah caawinta maleeshiyaad ka tirsan ururka IS.
Mareykanka oo walaac ka muujiyay dib u dhacyada ka jira hanaanka doorashada 2016
Sagal Radio Services • News Report • May 21, 2016
Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay dib u dhacyada ka jira hanaanka doorashada 2016 ee Soomaaliya, iyadoo loogu baaqay Baarlamaanka inuu qaato ansixiyo hanaanka doorashada.
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha oo Muqdisho kula kulmay wafdi ka socday Mareykanka (Sawirro)
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu wehliyo Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Sharma’arke, ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay wafdi ka socday dowladda Mareykanka oo uu horkacayey Madaxa arrimaha Africa ee xafiiska Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibedda, Mr Bruce Wharton.
Mareykanka oo taageero dheeraad ah siinaya Ciidamada Kenya
Sagal Radio Services • News Report • January 18, 2016
Mareykanka ayaa cambaareeyay weerarkii jimcihii la soo dhaafay ay Al-Shabaab ku qaaday Saldhig Ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM ku lahaayeen deegaanka Ceel-Cadde ee Gobolka Gedo.
Hub iyo waxyaalaha qarxa oo laga helay guriga lammaane weerarka ka geystey California(Sawiro)
Saraakiil ka tirsan hay’ada u qaabilsan dalka Maraykanka baarista dambiyada FBI ayaa sheegay in ugu yaraan shan kun oo rasaas ah,tobaneeyo bambooyin ah iyo qalab laga sameeyo waxyaalaha qarxa laga helay guriga ay degenaayeen lamaanihii weerarka ka geystey magaalada San Bernardino.
Mareykanka ayaa mar kale uga digay Muwaadiniintiisa inay u safraan Soomaaliya, iyadoo wali ay jirto khatar dhinaca amniga ah.
Booliska Maraykanka oo soo qabtay maxbuuskii labaad ee ka baxsaday xabsiga New York (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • June 29, 2015
Maxbuuskii labaad ee ka baxsaday xabsi ku yaalmagaalada New York ayay Booliska Maraykanka soo qabteen kadib markii uu dhaawacmay.
Maxkamad ku taal Mareykanka oo dil ku xukuntay ninkii qarxiyay Tartankii Orodka ee Boston
Sagal Radio Services • News Report • May 16, 2015
Maxkamad ku taal Mareykanka ayaa dil ku xukuntay Dzhokhar Tsarnaev oo 21-jir ah, kaasoo ka dambeeyay qaraxii magaalada Boston ka dhacay sanadkii 2013, xilligii uu dhamaanayay Tartankii Orodka ahaa.
Saddex dhalinyaro Soomaali ku xiran Mareykanka oo la sheegay inay qirteen Taageerida Al-Shabaab
Saddex dhalinyaro Soomaali ah oo ku xiran xabsi ku yaalla magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa qirtay inay taageerayeen Al-Shabaab.
Maraykanka oo xaqiijiyay inuu ka dambeeyay weerar lagu diley sarkaal ka tirsan Alshabaab
Sagal Radio Services • News Report • March 19, 2015
Wasaarada Gaashaandhiga Maraykanka ayaa xaqiijisay in ay Maraykanku uu mas’uul ka ahaa dilkii sarkaal ka tirsan ururka Alshabaab Adan Garar.
Barack Obama oo Sannado badan kaddib Danjire u soo Magaacabay Somalia
Sagal Radio Services • News Report • February 25, 2015
Madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama ayaa markii u horreysay danjire u soo magacaabay Somalia tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya sannadkii 1991-kii, iyadoo tani ay tahay tallaabo xoojinaysa xiriirka Somalia iyo Mareykanka.
Xukuumadda Mareykanka oo ka Hadashay Xayiraadda Xawaaladaha Somalida
Sagal Radio Services • News Report • February 13, 2015
Dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horreysay ka hadashay bankiyada dalkeeda oo xiriirka u jaray xawaaladaha Soomaalida ee la marin jiray lacagaha ku socda Soomaalida ku nool gudaha dalka, taasoo siyaabo kala duwan ay uga hadleen xildhibaanno Mareykan ah.
Mareykanka oo markii u horeysay baabuurta qafilan ee MRAP ugu deeqaya howl galka AMISOM
Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ku sugan uu dhamaadka bishan Janaayo ku wareejinayo baabuurta qafilan ee aan xabadaha iyo miinooyinka karin, kuwaasoo loo yaqaano MRAP, iyadoo 20 ka mid ah baabuurtan la siinayo Ciidamada Brundi iyo Uganda.
Mareykanka oo uga digay muwaadiniintiisa inay u safraan dalka Jabuuti
Sagal Radio Services • News Report • November 26, 2014
Wasaarada Arrimaha Dibada Mareykanka ayaa war ay soo saartay waxay uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan dalka Jabuuti, kadib markii ay heshay xog ku aadan weeraro argagixiso oo laga yaabo in lagu bartilmaameedsado danaha Mareykanka.
US Deeply Concerned With Political Turmoil in Somalia
The United States notes with concern the recent political turmoil in Somalia. Actions to put forward a parliamentary motion for a vote of no confidence in the prime minister do not serve the interests of the Somali people.
Milateriga Mareykanka oo sheegay in duqeymo ay la eegteen Hogaanka Ururka ISIS
Milateriga Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in duqeymo ay la eegteen hogaanka dowladda Islaamiga ee ISIS meel ku dhow magaalada Mosil, iyadoo duqeynta lala bartilmaameedsaday gawaari ay la socdeen hogaanka ururkaas,
Mareykanka oo soo dhoweeyay qabashadii Baraawe
Ergeyga Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya James P. McAnulty ayaa hambalyo u diray dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Ciidamada AMISOM guulihii u dambeeyay ee ay ka gaareen howl galka Badweynta Hindiya.
Dowladda Mareykanka oo ugu hambalyeysay Dowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed Maalinta Xoriyada Soomaaliya:-War-Saxaafadeed
Sagal Radio Services • News Report • July 1, 2014
Ku Simaha Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qabailsan Arrimaha Soomaaliya Brian H. Phipps, ayaa ugu hambalyeeyay Soomaaliya oo u dabaal-dageyso maalinta qaranimada ee 1-da July. “Aniga oo ka wakiil ka ah Madaxweyne Barack Obama, Xoghayaha Arrimaha Dibedda John Kerry iyo shacabka Maraykanka, waxaan hambalyo ku aadan xuska sanad guurada 54-aad ee maalinta xoriyada Soomaaliya u dirayaa dowlada iyo shacabka Soomaaliya”, ayuu yiri Phipps.
Mareykanka oo uga digay muwaadiniintiisa ku sugan Jabuuti inay tagaan meelaha dadka ku badan yahay
Kadib markii 24-kii bishii hore weeraro is qarxin ay ka dhaceen maqaaxi ku taal dalka Jabuuti ayaa waxaa soo baxaya digniino dowladaha reer galbeedka u jeedinayaan muwaadiniintooda oo ku aadan halista weeraro argagixiso.
Dawlada Mareykanka oo ka digtay weeraro ay Al Shabaab ka geysato dalka Burundi
War kasoo baxay waaxda arrimaha dibbadda Maraykanka ayaa waxay dadkeedsa uga digtay inay safaro ku tagaan wadanka Burundi oo ka mid ah wadamada ay ciidamada Soomaaliya ka joogaan waxaana ay u sababaysay in Xarakadda Al-Shabab ay diyaariyeen weeraro ay dalkaasi ku qaadaan.
Muslimiinta Washington oo loo sharciyeynayo fasaxa ciidaha
Maamulka gobolka Seattle Washington ee Maraykanka ayaa soo saaray sharci oggolaanaya in ay muslimiinta dalkaas fasax helaan maalmaha ciidaha Islaamka.
Mareykanka oo sheegay in Al-Qaacida looga adkaaday dalal dhowr ah
Sagal Radio Services • News Report • January 31, 2014
Guddiga sirdoonka ee aqalka baarlamaanka waddanka Maraykanka ayaa warbixin ay siiyeen golaha waxay kaga hadlayeen arrimaha ammaanka caalamka gaar ahaan halista ururro uu Al-shabaab ka mid yahay, iyagoo sheegay in Soomaaliya uu hadda ka mid yahay dalalka lagu jabiyay ururrada Al-qaacida xiriirka la leh.